XOG:- Maxaa kusoo kordhay shirkii madasha oo maalintii afaraad ka soconaya Villa Soomaaliya – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
XOG:- Maxaa kusoo kordhay shirkii madasha oo maalintii afaraad ka soconaya Villa Soomaaliya
Waxaa xarunta madaxtooyadda Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho maalintii afaraad weli ka soconaaya shirka madasha wadatashiga qaran oo ay yeelanayaan madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada dalka.
Shirkaasi oo weli si habsami leh uga socda xarunta madaxtooyadda Villa Soomaaliya ayaa maalinta berri ah la rajeynayaa in si rasmi ah loo soo gaba-gabeeyo.
Waxaa shirkaasi la dhihi karaa mid horumar ku talaabsadey, taas oo la xiriirta de-dejinta arrimaha doorashada lagu wado inay sanadkaan dalka ka dhacdo, sida meel marinta miisaaniyadda doorashada, hanaanka mataaladda aqalka sare ee gobolka Banaadir, iyo xubnaha ka imaan doona beelaha kasoo jeeda Somaliland.
Sidoo kale waxaa la isku af-gartey in si deg-deg ah loo soo dhiso maamulka ka dhaxeyn doona gobolada Hiiraan iyo Sh/dhexe, iyo in si buuxda loo taageero howlaha guddiga doorashada ee heer federaal ah islamarkaana xil weyn iska saaray sidii doorashadaan ay u guuleysan laheyd.
Dhinaca kale, madaxda shirkan ka qeyb-galeysa ayaa ka mid ah madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, ra’iisul wasaare Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke, ra’iisul wasaare ku-xigeenka dalka Maxamed Cumar Carte iyo madaxda maamul goboleedyada dalka.
Ugu dambeyntii, gaba-gabada shirkaan ayaa la filayaa in laga soo saaro war-murtiyeed qeexaya qodobada la isku afgartey.